Semalt शक्तिशाली सage्लग्नता उपकरण
तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिक प्राप्त गर्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हो। जे भए पनि, यो स्पष्ट संकेत हो कि तपाईंको कुञ्जीशब्दहरू र अन्य एसईओ रणनीतिहरू राम्रोसँग काम गरिरहेका छन्। तर धेरै पटक, तपाइँको साइटमा क्लिकहरू लिनु राम्रो निवास समयलाई अनुवाद गर्दैन। यो किनभने तपाईसँग राम्रो एसईओ हुन सक्छ, तर तपाइँको वेब सामग्री केवल आकर्षक छैन।
तपाईंले महसुस गर्नुभयो कि तपाईंको ट्राफिक सुधार हुँदैछ, तर तपाईं कुनै परिणामहरू महसुस गर्नुहुन्न। यदि तपाईं यस कोटीमा पर्नुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई सूचित गर्न चाहन्छौं कि तपाईंको वेबसाइट अहिले सम्म पूर्ण क्षमतामा छैन। तपाइँले क्लिकहरू प्राप्त गर्ने तरिका फेला पार्नुभयो - अब यसलाई राख्ने तरिका पत्ता लगाउने समय भयो।
तपाईंको समस्याको समाधान संलग्नतामा निहित छ। तपाइँले तपाइँको आगन्तुकहरूलाई रहनको लागि र तपाइँले प्रस्ताव गर्नुभएको सामग्रीबाट आनन्द लिनको लागि मार्ग फेला पार्न आवश्यक छ SERP पृष्ठमा फर्केर जानु भन्दा हताशतामा।
आधारभूत कुराबाट शुरू गरौं, हैन त?
वेब संलग्नता भनेको के हो?
वेब सगाई आगन्तुकहरु संग एक सम्बन्ध निर्माण को प्रक्रिया हो। सामग्री प्रदान गर्ने प्रक्रियाले यो सम्बन्ध बनाउँदछ र उनीहरूलाई रमाईलो र पर्याप्त मनमोहक फेला पार्दछ। उनीहरूलाई तपाइँको वेबसाइटको वरिपरि घुम्न उपयोगी छ। अन्त्यमा, तपाई चाहनुहुन्छ कि तपाईको वेब सामग्री यति ठूलो होस् तपाईका आगन्तुकहरु तपाईको वेबसाइटको राजदूत बन्नेछन्। तपाइँको सामग्रीहरू कत्ति अचम्मको छ भनेर तिनीहरू बन्द राख्न सक्षम हुनुहुने छैन।
यो वास्तविकतामा आउन, उनीहरूले तपाइँको वेबसाइटले के गर्छ भनेर तत्काल बुझ्नुपर्दछ र केवल ग्राहक हुनुबाट ग्राहक बन्नु पर्छ जसले टिप्पणी, मनपराउने र तपाइँको वेब सामग्री साझा गरेको छ।
यदि तपाइँ तपाइँको सment्लग्नता सहि पाउनुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको प्रयोगकर्ताहरु लाई:
तपाईंको सामग्री अवलोकन गर्न तपाईंको वेबसाइटमा अधिक समय खर्च गर्नुहोस्
तपाईंको वेबसाइटमा अधिक पृष्ठहरू हेर्नुहोस् तपाईंको इनबाउन्ड लिंकहरू बढाउन तपाईंलाई मद्दत गर्दछ
उनीहरूको साथीहरू र उनीहरूको सामाजिक मिडिया पृष्ठहरूमा सामग्री साझा गर्नुहोस्
तपाईंको वेबसाइट छोड्नु अघि विशेष कार्यहरू लिनुहोस्
हामी यी सबै हासिल गर्न सक्षम भएपछि, हामी गर्वसाथ भन्न सक्छौं कि हामीले हाम्रो वेब सामग्री संलग्नता उपकरणहरू प्रभावी रूपमा लागू गरेका छौं। यहाँ केहि उपकरणहरू छन् जुन Semalt ले तपाईंको आगन्तुकहरू तपाईंको वेबसाइटमा रहन्छन् भनेर सुनिश्चित गर्न प्रयोग गर्दछ र तपाईं परिणामहरू देख्नुहुन्छ।
तपाईंको वेबसाइटमा आगन्तुकहरू संलग्न गराउने तरिकाहरू
मूल र आकर्षक सामग्री बनाउनुहोस्
यो तपाइँको पाठकहरूलाई व्यस्त राख्नको लागि यथोचित सटीक तरीका हो। सक्कली र आकर्षक सामग्री भएको गुगलको साथ लामो दूरीमा जान्छ। मूल सामग्रीको साथ, तपाईं गुगलको राम्रो पक्षमा बस्नुहुन्छ, र तपाईं आफ्ना पाठकहरू देखाउँनुहुन्छ कि तपाईं एक प्रतिष्ठित वेबसाइट हुनुहुन्छ। तपाइँ तपाइँको विशेष प्रकारको दर्शकहरूको अनुरूप अद्वितीय सामग्री प्रदर्शन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। चोरी गरेर वा केवल स्पिनि tools उपकरणको प्रयोग गरेर चोरी नगरी काममा राख्नु नै तपाईलाई गुगलको शत्रु बनाउँदछ। अझै, यसले सामग्रीहरू बनाउँदछ जुन तपाईंको दर्शकहरूको लागि अनुपयुक्त हुन सक्छ। दर्शकहरूमा भिन्नतालाई विचार गर्दै, अर्को वेबसाइटको लागि के काम गर्नुभयो तपाईंको वेबसाइटको लागि काम गर्ने ग्यारेन्टी छैन।
बलियो हेडलाइटहरूको प्रयोग गर्दै
यसले तपाईंको हेडलाइन् how कति प्रभावकारी हुन सक्छ भन्नेमा अचम्म पर्दछ। हेडलाइटहरू प्रयोग गर्नु भनेको तपाइँको खोज इञ्जिनलाई अनुकूलित गर्ने एक मात्र तरिका हैन, र यसले तपाइँको सामग्रीसँग श्रोताहरूलाई व्यस्त राख्नको रूपमा कार्य गर्दछ।
राम्रो शीर्षकले रुचि जगाउँदछ र पाठकहरूलाई प्रत्येक शीर्षक वा उपशीर्षकहरू नेभिगेट गर्न आमन्त्रित गर्दछ। तथ्या .्कले देखाउँदछ कि %०% इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले पढ्न वा नगर्ने निर्णय गर्नु अघि हेडिingsहरू पढ्दछन्। ती पाठकहरू मध्ये केवल २०% ले बाँकी सामग्री पढ्न अगाडि बढ्छ।
यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँदछ कि तपाईको हेडिंग चुम्बक हो जुन तपाईलाई आगन्तुकहरू लिन र राख्नको लागि चाहिन्छ। त्यहाँ शीर्षकका धेरै प्रकारहरू छन्, तर गुगलले केवल चार मुख्य प्रकारहरू पहिचान गर्दछ। तपाईँ सँग छ:
शीर्षक: यो सामान्यतया पृष्ठ को पहिलो शीर्षक को रूप मा आउँछ। यसले लेखको मुख्य फोकस वर्णन गर्नुपर्दछ।
हेडि 1 १: यो अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो जुन तपाईं पृष्ठमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यो मुख्य छाता शीर्षक अन्तर्गत आउँछ।
हेडि2२: यो हेडिंग १ को अन्तर्गत आउँदछ किनकि यसले हेडिंग १ को अर्को ब्रेक डाउनको रूपमा काम गर्दछ।
हेडिंग:: तपाईको हेडिंगको अन्तिम इकाईको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सुझाव दिइन्छ। तपाईं शीर्षकको धेरै सानो एकाइहरू चाहानुहुन्न। यदि राम्रोसँग प्रयोग गरिएको छैन भने, यो एक लाभको सट्टामा समस्या बन्छ।
व्यक्ति सूचनाको लागि केवल तपाईंको सामग्री पढ्दैनन् - तिनीहरूलाई यसको जानकारीको चाँडो आवश्यक छ
तपाइँको हेडिingsहरू जानकारीको एक अत्यावश्यक भाग छिटो चाहिन्छ उठाउनका लागि गाईडको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यदि तपाईं पुस्तकालयमा हिंड्नुहुन्छ भने, सम्भाव्यता यो छ कि तपाईंले ननफिक्शन किताब सबैभन्दा लोकप्रिय शीर्षकको साथ लिनुहुन्छ। तपाइँको शीर्षक जिज्ञासाको भावना छोड्नु पर्छ तर सामग्री पछाडि मुख्य कारण को एक निश्चित स .्केत।
तपाईंको सामग्रीलाई कार्ययोग्य बनाउनुहोस्
के तपाईंले आफ्ना श्रोताहरूसँग कुरा गर्नुभयो? के तपाईंले सल्लाह, कार्यलाई कल, निर्देशनहरू, वा चरणहरू तिनीहरूले अनुसरण गर्न सक्छन्? यी तत्वहरूले तपाईंको लेखमा एक सम्बन्ध र निर्भरतालाई उत्तेजित गर्दछ। तपाइँका पाठकहरू तपाइँका निर्देशनहरू प्रयास गर्न वा पालन गर्न चाहान्छन्, जसको मतलब हो कि तिनीहरूले तपाइँको वेब सामग्री पढ्ने वा हेर्ने छन् यो समाप्त नभएसम्म
उत्तम प्रकारको सामग्रीले उनीहरूले भर्खरै प्राप्त गरेको जानकारी कसरी लागू गर्ने भनेर बुझाउछ। के गर्ने भनेर तपाइँको पाठकलाई अपमान गर्दैन; यदि सही गरिएमा, यसले तपाइँका पाठकहरूलाई उनीहरूलाई राम्रोसँग चिनेको छ भनेर आश्वासन दिने समाप्त हुन्छ, र यो ज्ञान हो जसले तपाइँको सामग्रीले प्रदान गर्ने निर्देशनहरू लागू गर्न मद्दत गर्दछ। तपाइँको वेब सामग्री लेख्दा, Semalt ले तपाइँको वेब सामग्री व्यावहारिक रूपमा प्रस्तुत गरेको जानकारीलाई पाठकहरूले कसरी प्रयोग गर्न सक्दछ भनेर सुझावहरू छोड्दछन्।
सुझाव: पाठकहरू गैरफिक्शन पढ्दैनन् किन कि उनीहरू सबै कुरा जान्दछन्, तर किनभने तिनीहरू सिक्न र अझ राम्रो हुन चाहान्छन्। Semalt तपाइँका पाठकहरूलाई पनि त्यस्तै भावना दिन्छ।
तपाईंको सामग्री उत्तर प्रदान गर्नु पर्छ
यदि "सर्च ईन्जिनको प्रयोग के हो" भनेर सोध्यो भने, "साझा उत्तर" उत्तरहरू प्रदान गर्न "हुन्छ," यो उत्तर एकदम सहि छ। सामान्यतया, प्रयोगकर्ताले कुञ्जी शब्दहरूको स्ट्री inमा टाइप गर्दछ किनकि तिनीहरू प्रश्नको उत्तर दिन सूचना खोज्दैछन्।
तपाइँको सामग्री तपाइँको पाठकहरु लाई कायम राख्न यी प्रश्नहरुको उत्तर दिन सक्षम हुनुपर्दछ। यो तपाइँको वेबसाइट को अन्तिम उद्देश्य हो। तपाईंको वेब सामग्री तपाईंको पाठकहरूलाई नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। कोही पनि पनी पढ्न चाहँदैनन् जुन उनीहरूलाई पहिले नै थाहा छ। यदि तपाइँ नयाँ ज्ञान उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाइँका पाठकहरू बोर हुनेछन् र छोड्नेछन्।
कुनै पनि जानकारी पढ्न चाहँदैन जुन वास्तविक वा सहि छैन। यदि लेख एक वेबसाइट को लागी लेखिएको छ, हजारौं र सम्भवतः लाखौं दर्शकहरु यो पढ्न, र यदि जानकारी गलत बाहिर जान्छ भने, यसको गम्भीर परिणाम हुन सक्छ। के तपाइँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि यसले कत्ति क्षति पुर्याउँदछ, दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाइँको वेब सामग्रीले तपाइँको कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्दछ?
तथ्या and्क र तथ्या .्कहरू प्रयोग गर्नु तपाईंको सामग्री सुशोभित गर्ने एक रमाईलो तरीका हो - यसले तपाईंको दर्शकहरूलाई तपाईंको सामग्री जस्तो विविधता दिन्छ। तर सावधान हुनुहोस् कि तपाईंको सामग्री मा प्रदर्शित प्रत्येक आंकडा, तथ्या .्क, वा ग्राफ सही छ।
यहाँ केहि सुझावहरू छन् तपाइँ कसरी प्रदर्शित जानकारी सही छ सुनिश्चित गर्न को लागी:
तपाईं कसलाई जोड्दै हुनुहुन्छ विचार गर्नुहोस्
तपाइँको तथ्या .्कहरु लाई लिंक गर्नाले मद्दत गर्न सक्छ
लिंकिंगले खोज इञ्जिनहरूलाई तपाइँको वेबसाइट फेला पार्न मद्दत गर्दछ
तपाईंको दर्शकले तपाईंको सामग्री पढ्छ, र यो आकर्षक हुन्छ जब तपाईं तिनीहरूलाई एक श्रोता दर्शक बनाउनुहुन्छ। तपाईं तलका तरिकाहरू मार्फत तिनीहरूका विचारहरू उत्तेजित गर्न सक्नुहुनेछ:
तपाइँको पाठकहरूलाई प्रश्नको साथ छोड्नुहोस्: यो ध्यान दिएर गर्नुपर्छ, तपाईंले अपूर्ण सामग्री लेख्नु हुँदैन। तर यसको सट्टामा, ती प्रश्नहरू समावेश गर्नुहोस् जुन पाठकहरूले उनीहरू कसरी उनीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन् भनेर प्रतिबिम्बित गर्दछन्।
कथाहरू प्रयोग गर्नुहोस्: कथाहरू प्रयोग गर्नाले तपाईंको सामग्री थप व्यक्तिगत बनाउँछ। जानकारीहरू पार गर्न यो उत्तम र अधिक व्यावहारिक तरिका हो किनभने तपाईंको दर्शकहरूले यसलाई सजिलोसँग बुझ्न सक्दछन्।
यो अन्तिम उपकरण Semalt आकर्षक सामग्री सिर्जना गर्न प्रयोग गर्दछ। व्यक्ति बिभिन्न तरिकाले सिक्छन्: केहिलाई लागी, पढ्न उत्तम तरिका हो, अन्य तस्वीरहरु र भिडियोहरु को लागी आवश्यक छ। तस्विर र भिडियोहरू प्रयोग गर्नाले तपाईंलाई तपाईंको पोइन्ट स्पष्टसँग वर्णन गर्न सक्दछ। यही कारणले तिनीहरू आधुनिक पाठ्यपुस्तकहरूमा यति सामान्य छन्। चित्रहरु र भिडियोहरु एक उत्कृष्ट उपकरण Semalt को उपयोग पठन अनुभव बृद्धि गर्न को लागी हो। र one्गको स्पर्श बिना कोही कोही मात्र पढ्न चाहँदैन।
तपाईंले नोट गर्नु पर्दछ कि केवल छविहरू जसले तपाईंको सामग्रीलाई मूल्य थप गर्न मद्दत गर्दछ। गलत छवि प्रयोग गर्नुभन्दा राम्रो भन्दा बढी हानि गर्छ। तस्विर र भिडियोहरू प्रयोग विशेष गरी फाइदाजनक छ किनकि ती तपाईका पाठकहरूको दिमागमा राम्रोसँग अडिग छन्। तपाईं आफ्नो सामग्री तपाईंको पाठकहरूको दिमागमा टाँस्न चाहनुहुन्छ। तपाईं आफ्नो सेवाहरू चाँडै सम्झनको लागि सक्षम हुन चाहनुहुन्छ। किनकि आगन्तुकहरूले तस्विर र भिडियोहरू सम्झन सक्छन्, यसैले वरपरको सामग्री सम्झन सजिलो हुन्छ।
अनलाइन विक्रेताहरूसँग उनीहरूको सम्भावित ग्राहकहरू के खरीद गरिरहेका छन् भनेर देखाउन आकर्षक छविहरू र भिडियोहरू प्रयोग गर्न बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। कसैले पनि तपाईको शेल्फबाट केहि पनि लिने छैन यदि उनीहरूलाई थाहा छैन कि तिनीहरूले के पाउँदैछन्।
Semalt यी सबै सगाई उपकरणहरू महान सामग्री सिर्जना गर्न र तपाईंको आगन्तुकहरूले उनीहरू तपाईंको वेबसाइटमा देखेका देखेर खुशी छन् भनेर सुनिश्चित गर्न प्रयोग गर्दछन्। अन्तमा, तपाईंसँग खुसी ग्राहकहरू छन् तपाईंको व्यवसायको संरक्षण गर्न इच्छुक छन्।